तपाईंको मन आज कस्तो छ ? - SatyaPatrika
तपाईंको मन आज कस्तो छ ?
केही समयअघिको घटना हो। म थानकोटबाट पुरानो बसपार्क चल्ने सार्वजनिक बस चढ्थेँ। कलंकीदेखि कालिमाटीको बाटोमा अक्सर देखिने एकजना मानिस थियो। यो बाटोमा यात्रा गर्ने वा आसपास बस्ने प्रायःजसो मानिसले उसलाई देखेको हुनुपर्छ।
थानकोट रूटमा चल्ने बसको यात्रा निक्कै कष्टकर हुन्थ्यो। सायद अहिले पनि अवस्था उस्तै छ। बसका यात्रुलाई सहचालक भाइले विभिन्न आसनमा बस्ने निर्देशन दिन्थे। कहिले एक लाइन उभिने, कहिले हातले यो डन्डी समात्ने, कहिले गोडा उचाल्ने त कहिले ढाड बांगो पार्ने।
यो रूटमा चल्ने बसको सवारी योगासन गरेजस्तो हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ त बसमा यति धेरै मान्छे कोचिन्थ्यो कि कहिल्यै नाम नसुनेको र नगरेको गुन्द्रुक आसन समेत गर्नुपर्थ्यो।
कतै पढेको थिएँ, कुनै पनि देशको विकासको अवस्था हेर्न त्यस देशको सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन हेर्नु पर्छ रे। यस मामिलामा हाम्रो देश पुछारतिरबाट गन्यो भने प्रथम स्थानमै पर्ने प्रचुर सम्भावना देख्छु।
एकदिन यही बसको सवारी गर्दै थिएँ। बस कालिमाटी पुगेर ट्राफिक लाइटमा रोकिएको थियो। एक्कासि बसभित्रकी एक महिला सिसाबाहिर हेर्दै कराइन्- हेर! हेर! कस्तो नकच्चरो मोरो रहेछ! लाज पचेको गतिछाडा! यस्तालाई त जाक्नु नि पुलिसले खोरमा!
महिलाको आवाज सुनेर बसका सबैजना बाहिर आँखा डुलाउँछन्। म पनि झ्यालको डन्डी समात्दै अघि बढेर अवस्था के रहेछ, बुझ्न खोज्छु। रोकिरहेको बसभित्रबाट बाहिर हेर्दा जिन्दगीमा अहिलेसम्म नदेखेको एउटा दृश्य देखेँ। कालिमाटी मूल सडकको छेउमा रहेको ढलमाथि एकजना मानिस आफ्नो पाइन्ट र कट्टु खोलेर दिसा गर्दैछ।
दिनदहाडै आफ्नो शरीरको तल्लो भाग उदांग गरेर दिसा गरिरहेको मानिस देख्दा मनमा कस्तो भाव उठ्छ होला ? उसलाई देख्ने मानिसहरूको मनमा रिस, घृणा जे-जस्ता भाव उठे पनि ऊ निस्फिक्री थियो। उसको अनुहार भावशून्य!
यो बहुला जहिल्यै केही न केही उट्पट्याङ गरी नै रहन्छ, बसचालक उसलाई चिनेझैं गर्दै आफ्नो कुरा राख्छन्।
उनको सिटसँगै बसेको यात्रु थप्छन्, यो पागल यस्तै हो। कैले चुरोटको ठुटो चपाउँदै हिँड्छ। कहिले थुकेको पान चाट्दै हिँड्छ। मान्छे त खानदानी परिवारको हो तर दिमाग सट भएपछि यस्तो हालत भयो। उनको कुरा वरिपरिका सबैले चाख दिएर सुन्दै छन्।
ट्राफिक लाइटमा रातोपछि पहेँलो बत्ती बल्यो अनि लगत्तै हरियो। सबै सवारीसाधन आ-आफ्नो गच्छेअनुसार गति बढाउन थाले। हरियो बत्ती बलेपछि एकैछिन त तँछाडमछाडको अवस्था नै बन्यो। को कति चाँडै अघि बढ्ने र गति लिने भनेर।
ट्राफिक लाइटको पहेँलो बत्तीलाई भारतीय स्ट्यान्ड-अप कमेडियन विश्व कल्याणरथ फाल्तु र बेकारु को संज्ञा दिन्छन्। पहेँलो बत्तीको अर्थ तयारी अवस्थामा बस भन्ने हो।
विश्व भन्छन्, ुआजको यो दौडादौडको दुनियाँमा को तयारी अवस्थामा छैन र ?
उनी थप्छन्, ुट्राफिक लाइटबाट पहेँलो बत्ती तुरुन्त हटाऊ सरकार !
दर्शकदीर्घामा बस्ने सबैजना गलल्ल हाँस्छन्।
उनले भनेजस्तै हाम्रो वरिपरि हेर्ने हो भने यो हतार-हतार र भागदौडको चरित्र प्रशस्त देख्न पाइन्छ। तर अचम्मको कुरा के भने हामी सबैलाई हतार हुन्छ, तर समयमा कोही पुग्दैन। नेपालीको रगतमा समयनिष्ठ जीन को कमीकै कारणले होला, नेपाली ट्याम यस्तै हो भन्ने जनबोली प्रख्यात रहेको।
हरियो बत्ती बलेर बस अघि बढ्दै गर्दा ढलमाथि दिसा गरिरहेको मानिस उठेर पाइन्टको खीप लगाउँदै थियो। बसभित्रका केही ुभद्रु महिला उसलाई ुमरेस्ु भनेर धारे हात लगाउँदै थिए। केही ुसज्जनवृन्दु भने उसको छेउमै पर्ने गरी थुकेर मुख बिगार्दै थिए।
सहचालक भाइ पनि लहलहैमा बोले- थुक्क पाजी!
कालिमाटीमा सार्वजनिक रूपमा दिसा गरिरहेको मानिसले मलाई धेरै हदसम्म विचलित बनायो। बुझ्दै जाँदा थाहा पाइयो, ऊ त्यतै आसपास क्षेत्रको एक धनाढ्य परिवारको सदस्य रहेछ। मानसिक अवस्थामा समस्या देखा परेपछि ऊ त्यसरी भौतारिँदै हिँड्न थालेको रहेछ। परिवारले हेरचाह गर्‍यो(गरेन, औषधि मूलो गर्ने प्रयास गर्‍यो(गरेन, यी सबै रहस्यका गर्भमा छन्।
कालिमाटीमा देखेको दृश्यको प्रतिबिम्ब कुनै न कुनै रूपमा म काम गर्ने पाटन अस्पतालका ओपिडी, वार्ड, इमर्जेन्सीमा आफूले जाँच्ने बिरामीमा पाउने गरेको छु।
गोदावरीबाट पाटन अस्पताल जँचाउन आएका एकजना बिरामीले भने, ुडाक्टरसाब मलाई डर मात्रै लाग्छ। घरबाट निस्कनै सक्दिनँ। खाली केही न केही नराम्रो हुन्छ भन्ने सोच मात्रै आउँछ। गोदावरीबाट माइक्रो चढेर यहाँ अस्पताल आइपुग्न मलाई सात दिन लाग्यो।ु
बिरामीले सरर आफ्नो कुरा राखे।
सात दिनरु होइन होला!
दस-एघार किलोमिटर होला पाटन अस्पतालबाट गोदावरी। कसरी लाग्यो सात दिनरु विस्तारै हिँड्दै आए पनि डेढ-दुई घन्टामा आइ पुगिन्छ।
म जिज्ञासा राख्छु।
अघिदेखि मेरो आँखामा आँखा जुधाउँदै कुरा गरिरहेका बिरामी तल हेर्दै बोल्छन्, ुहोइन डाक्टरसाब हरेक पटक जसोतसो गोदावरीको माइक्रो चढ्ने ठाउँसम्म आइपुग्थेँ। तर माइक्रो चढ्न लाग्दा डर लाग्थ्यो। कतै यो माइक्रो पल्टिने त होइनरु बाटोमा दुर्घटना हुने त होइनरुु
उनी भन्दै गए, ुकुनै दिन लाग्थ्यो, माइक्रोमा बसेका मान्छेले मेरा बारेमा कुरा काट्ने पो हुन् किरु मलाई गिज्याउने पो हुन् कि ? यस्तो सोच्दा(सोच्दा डरैडरमा सात दिन बित्यो। आज चाहिँ जे पर्लापर्ला भनेर आँटै गरेर आएँ।
गोदावरीबाट आएका बिरामी खासमा उनको पित्तथैलीमा बसेको ढुंगाका बारेमा बुझ्न आएका थिए। सर्जिकल ओपिडीमा बस्दै गर्दा उनी मेरो सामुन्ने आइपुगेका थिए। कुरा गर्दै जाँदा उनले आफूलाई परिरहेको यो डर लाग्ने समस्याका बारेमा कुरा राख्न थाले।
म उनको पित्तथैलीभन्दा पनि मन खोतल्न थालेँ। केहीबेरपछि पित्तथैलीको ढुंगाका बारेमा मैले आफ्नो सिनियरसँग सल्लाह गरेर उनलाई शल्यक्रियाका बारेमा जानकारी दिएँ। त्यसपछि हरबखत डरलाग्ने समस्याका लागि मानसिक रोगको ओपिडीमा सोसम्बन्धी डाक्टरलाई भेटेर सल्लाह सुझाव लिन भनेँ।
मानसिक रोग सुन्नासाथ बिरामी झस्किए। अनि डराउँदै सोधे, ुडाक्टरसाब म साइको हुन लागेको त होइन नि ?
होइन, होइन ! त्यसरी नबुझ्नुस् न। तपाईंको ज्यान बिरामी परेजस्तै, मन बिरामी पर्न खोजेको हो। एकचोटि जँचाउनुस्, तपाईंलाई सजिलो हुन्छ- मानसिक रोगको ओपिडी जाने पुर्जी लेख्दै मैले बिरामीलाई यी कुरा भनेँ।
जानै पर्ने हो र डाक्टरसाबरु हजुरले नै केही औषधि लेख्न मिल्दैनरु त्यता जाँदा फेरि कसैले देख्ला मलाई! झन् समस्या पर्छ, बिरामीले आग्रह गरे।
हेर्नुस् म मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर होइन। यो विषयमा केही ज्ञान त छ तर मलाई लाग्छ त्यही विषय जान्नु भएका डाक्टरले तपाईंलाई अझै राम्रोसँग हेर्नु हुन्छ र सहयोग गर्नु हुन्छ। शरीर हाम्रोमा जँचाउनु भयो, अब मन जँचाएर जानुस् एकपटक- म आफ्नो कुरा स्पष्टसँग बुझाउने प्रयास गर्छु।
बिरामी अन्कनाउँदै मानसिक रोग ओपिडीको पुर्जी लिन्छन् र बाहिरिन्छन्।
मलाई लाग्दैन ती बिरामीले मानसिक रोगका डाक्टर वा मनोपरामर्श दातासँग भेटे होला। आजकल पनि गोदावरी माइक्रो स्टेसनतिर डर मान्दै, संकोच मान्दै ती व्यक्ति पक्कै भौंतारिरहेका हुन सक्छन्।
एकदिन ड्युटी सकेर घर पुग्दा कलेजको पुरानो साथीको फोन आयो। केहीबेर गफसफ चलेपछि ऊ मुख्य मुद्दामा आयो।
यार मलाई समस्या परिरहेको छ। खासमा त्यसैले तँलाई फोन गरेको हो। साथी डाक्टर भएको केही फाइदा त हुनुपर्‍यो नि, ऊ प्रसंग जोड्दै छ।
फाइदा घाटा नभन् न यार ! मैले सकेसम्म, मलाई आएजति तँलाई सहयोग गर्ने हो- यति बोलेर म चुप लाग्छु र उसलाई आफ्नो कुरा राख्ने पालो दिन्छु।
ुयार, बिहे भयो। माया गर्ने श्रीमती छ। भर्खरै बच्चा पनि भयो। जागिर पनि ठिकठाकै चल्दैछ तर म खुसी छैन। जिन्दगीमा किन किन कस्तो खालीपन महसुस हुन्छ,ु ऊ एक सासमा वाक्य सक्छ।
तेरो निन्द्रा कस्तो छ- म एकछिनको शून्यता तोड्दै प्रश्न राख्छु।
ुराति त एक पेग नखाइ निद्रा आउँदैन मलाई, तँलाई के ढाँट्नु,ु उ फ्याट्ट जवाफ दिन्छ।
मित्र, ढाँट्नु त हुँदै भएन नि१ जिन्दगीमा तीन जनालाई नढाँट्नु रे( म यताबाट कुराकानी हल्का बनाउने प्रयास गर्छु।
ुको हुन् ती तीन जनारुु ऊ उत्सुक भएर सोध्छ।
डाक्टर, वकिल र भेट भयो भने भगवान – म खरर उत्तर दिन्छु।
उत्तर सुनेर उताबाट ऊ जोडले हाँस्छ।
ुब्रो, मलाई डिप्रेसन भाुको हो त,ु हाँसो रोकिनासाथ ऊ प्रश्न गर्छ।
हुन सक्छ १ एकचोटि मानसिक रोगका डाक्टरलाई भेट् न त- म आफ्नो कुरा राख्छु।
साथी उताबाट बोल्छ, ुमानसिकको डाक्टरलाई नै भेट्नु पर्ने हो ररु डू आइ रियल्ली नीड सच हेल्परुु
अब हेर् तँलाई ज्वरो आयो भने डाक्टरलाई भेटेर रगत, पिसाब जँचाउन जान्छस् कि नाइँ ? अहिले तेरो मन बिरामी परेजस्तो छ, एकचोटि गएर मनको डाक्टरलाई भेट्। तँलाई सजिलो हुन्छ- यसो भन्दै म उसलाई आफूले चिनेका एक-दुई जना मनका डाक्टरका बारेमा जानकारी दिन्छु।
ऊ सहमति जनाउँदै फोन राख्छ। फोन राख्दै गर्दा ऊ भन्छ, ब्रो, ढाँट्न नमिल्ने तीन जनाको लिस्टमा एकजना थप् है !
मैले सोधेँ को हो त्यो चौथो व्यक्ति ?
उसले झटपट उत्तर दियो- प्यारी बुढी!
यसपालि यताबाट म जोडले हाँसे।
आफू वरिपरिका दस जना मानिसलाई सम्झिनुहोस्। ती दसमध्ये कम्तीमा चार जना कुनै न कुनै मानसिक समस्याले पीडित हुन सक्छन्। मानसिक रोगका क्षेत्रमा भइरहेका विभिन्न अध्ययनले यस्तै कहालीलाग्दो तथ्यांक अगाडि ल्याएको छ। अझ डरलाग्दो कुरा के भने, पछिल्लो समय नेपालमा आत्महत्या गर्नेको संख्या उलेख्य मात्रामा बढेको देखिएको छ। त्यस्तै मानसिक रोगका बिरामीले जति पीडा भोग्छन्, उनीहरूलाई हेरविचार गर्ने परिवारका सदस्यको दुखद भोगाइ र लाचारी साँच्चै कुन ढक तराजुले नाप्ने हो ! कल्पनासम्म पनि गर्न गाह्रो छ।
जनस्वास्थ्य विज्ञानमा एउटा शब्दावली निकै चर्चित छ जसलाई आइसवर्ग फेनेमेनेनु भनिन्छ। टाइटनिक सिनेमा हेर्नुभएको छ नि ? त्यसमा जहाज महासागरबीच रहेको हिमशैलमा ठोक्किएर दुर्घटनामा पर्छ। हिमशैल समुद्रमाथिबाट जत्रो आकारको देखिन्छ, पानीमुनि त्यसको आकार सोचेभन्दा निकै विशाल हुन्छ। मानसिक रोगमा पनि यस्तै नियम लागू हुन्छ। जति देखिन्छ, त्योभन्दा समस्या निकै बढी हुन्छ र यसको फैलावट धेरै हुन्छ।
मानसिक रोग किन सतहमा थोरै देखिन्छ त भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न हामी एकपटक हाम्रै सामाजिक परिवेशमा फर्किन पर्छ।
हरेक मानसिक रोगलाई बहुलाु , पागल , दिमाग सटु, साइकोु, हावा फुस्केकोु मान्ने परिवेशबाट हुर्किँदै आएका हामी खुलेर आफ्नो मन बिरामी भएको भन्न डराउँछौं। परिवारमा कसैलाई यस्तो समस्या छ भने सक्दो लुकाउने प्रयासमा रहन्छौं। कुनै साथी अलि बिस्तारै काम गर्छ भने हामी उसलाई ुसुस्तेु भन्दिन्छौं। अलि बढी अतालिन्छ भने उसलाई उसको मुखैमा डरपोकु भन्दिन्छौं। ऊ कस्तो मनस्थितिबाट गुज्रेको छ ? केलाउने फुर्सद कसैलाई हुँदैन।
साथी धेरै बोल्दैन, उदास बस्छ, घुलमिल गरिराखेको छैन भने हामीमध्ये कतिले उसलाई फोन गरेर वा भेटेर ओइ ठिक छस् नि, केही गाह्रो छ भने भन् है, म छु निु भनेका छौं ?
एकचोटि यो प्रश्न आफ्नो छातीमाथि हात राखेर आफैंले आफैंलाई गरौं।
मानसिक स्वास्थ्यका विज्ञहरूको भनाइ छ- एउटा यस्तो साथी होस् जोसँग धक फुकाएर गफ गर्न सकियोस्, कमजोरीका बारेमा भन्न सकियोस्, गाह्रो परेको सुनाउन सकियोस्। अनि सब कुरा सुनेर ऊ तपाईंको न्यायाधीश नबनोस्। बरू भनोस्- नआत्ती दोस्त, म छु। जे आइपर्छ सँगै सामना गरौंला।
हामीमध्ये कतिका यस्ता साथी छन्रु वा हामीमध्ये कति अर्को व्यक्तिका लागि यस्ता साथी बन्न सकेका छौं ?
जमाना दौडधूपको छ। भागदौडमा सबैजना आफूलाई कसरी सफल र खुसी प्रमाणित गर्ने भन्नेमा लागिपरेका छौं। सायद यसैले होला कुनै रेस्टुरेन्टमा खाइरहेको खाना हाम्रो पेट र आन्द्रामा पुग्नुअघि फेसबुक र इन्स्टाग्रामका भित्तामा पुगिसक्छन्। कतै घुम्न गइएको छ भने, प्रकृतिमा रमाउनभन्दा पनि फोटो खिचेर अपलोड गर्नको हतार हुन्छ हामीलाई। सूचना-प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले हामी विश्वको नजिक छौं। तर हेर्दै जाने हो भने हामी आफैंबाट चाँहि झन् झन् टाढा भइराखेका छौं।
पाटन अस्पतालमा विभिन्न विभागमा घुम्ने क्रममा हरेक दिन थुप्रै बिरामीसँग भेटघाट भइरहन्छ।
मानसिक रोग विभागको वार्डमा हरेक बिहान मनोचिकित्सकले बिरामीलाई सोध्ने एउटा प्रश्न छ( तपाईंको मन कस्तो छ ?
उत्तर विभिन्न आउन सक्छ- आत्तिएको छ, डराएको छ, दुःखी छ, ठुस्स छ, दिक्क छ, रिसाएको छ, उदास छ, हतास छ, ठीक छ, शान्त छ।
लाग्छ – भागदौड प्रतियोगिता चलिरहेको यो युगका हामी हरेक मानिसले बिहान बिछ्यौनामा आँखा खुल्नेबित्तिकै यो प्रश्न आफैंलाई सोध्नुपर्छ- मेरो मन कस्तो छ ?
मन बिरामी परेको हुन सक्छ। मनको खुब राम्रोसँग स्याहार सुसार गर्नुस् है! सहयोगी हातहरू वरिपरि छन्। टेक केयर !
(डा. आयास लुइँटेल पाटन अस्पतालमा आवासीय चिकित्सक हुन्।) सेताेपाटीबाट ।
एएफसी महिला एसियन कप छनोट स् नेपालले फिलिपिन्सको सामना गर्दै